बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! – Khabaarpati
November 3, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय !
काठमाडौँ । आजभोली मोटो मानिसको संख्या तेज गतिले बढि रहेको छ । धेरै मानिसहरुले शुरुवातमा मोटोपनमा त्यति ध्यान दिदैंनन् । तर जब मोटोपन धेरै बढेपछि त्यसलाई घटाउन घण्टौं पसिना बगाउँछन् । मोटोपन घटाउनको लागि खानपीनमा सुधार जरुरी छ । केही प्राकृतिक चीजहरु यस्ता हुन्छन् । जस्को प्रयोगले तौललाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यदि तौल घटाउन तपाइँ धेरै मेहनत गर्न सक्नुहुन्न भने तपाइँलाई आज हामी सजिलो उपायबारे जानकारी दिन्छौं ।
निम्न उपाय अपनाई तपाइँले आफ्नो तौल घटाउन सक्नुहुन्छस्
१. धेरै कार्बोहाइड्रेट भएको खाद्यपदार्थ त्याग्नुहोस् । चीनी, आलु र चामलमा कार्बोहाइड्रेट बढि हुन्छ । यस्ले बोसोलाई बढाउँछ ।२. गहँुको रोटि मात्र खानुभन्दा गहुँ, भटमास र चना मिश्रित आटाको रोटि धेरै फाईदाजनक हुन्छ ।
३ दिनहुँ बन्दागोभीको जुस पिउनुहोस् । बन्दागोभीमा बोसो घटाउने गुण हुन्छ । यस्ले शरीरको मेटाबोलिज्म ( शरीरको रासायनिक परिवर्तन हुने प्रक्रिया ) लाई ठिक गर्दछ ।४.मेवा नियमित रुपमा खानुहोस् । यो हरेक मौसममा पाईन्छ । लामो समयसम्म मेवाको प्रयोग गर्नाले यसबाट कम्मरको बोसो कम हुने हुन्छ ।
५. दही खानाले शरीरको अनावश्यक बोसो घट्दछ । मोहीको प्रयोग दिनको २–३ पटक गर्नुहोस् ।६. पीपलको धुलो बनाई त्यसलाई कपडाले छान्नुहोस् । यस धुलोलाई हरेक बिहान मोहीसँग खानाले बाहिर निस्केको पेट भित्र पस्दछ ।७. अमला र बेसारलाई बराबर मात्रामा पिसेर धुलो बनाउनुहोस् । यस धुलोलाई मोहीसँग खानुहोस् । यसबाट कम्मर पातलो हुन्छ ।
शरीरमा मुसा आएर हैरान हुनुहुन्छ ? केराको बोक्राबाट यसरी पाउनुहोस् छुटकारा
पाल्पामा भेटिए यस्ता अचम्मैका सर्प मान्छे , देखाए खत्रा चमत्कार ! संसार चकित(भिडियो)
मोटरसाइकल किन्न गएको ब्याक्तिलाइ भिखारी ठानेर बाहिर निकाल्दिए, यथार्थ थाहा पाएपछि सबैले हात जोडेर माफी मागे
April 7, 2021 goodmam
चुनौतीहरुले नै जिन्दगीलाई रोमान्चक बनाउछ र यसैमा तपाइको जिन्दगीको महत्व निर्माण हुन्छ – प्रेरणादायी भनाईहरु
June 24, 2021 goodmam
सुत्नुभन्दा अगाडि यसरी उमालेर खानुहोस् केरा, केहि दिनमै देखिनेछ यति धेरै चमत्कार !
May 14, 2021 goodmam
स्वास्थ्यमन्त्री पाण्डे गम्भिर बिरामी, महंगो उपचार खर्च लाग्ने भएकाले आर्थिक अभाव July 27, 2021
विजय शाहीको मृत्यु भएकै हो ? साँझपख नाकमा कपास राखीएको तस्वीर एकाएक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल July 27, 2021
घरमा पालेको बिरालोका कारण यी महिला गर्भवती भएपछि….. July 27, 2021
त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक केजी सुन बरामद, यी रहेछन् दुबईबाट सुन पठाउने ब्यक्ति July 27, 2021
२ महिना अघि मात्रै भित्राएको प्रहरीकी छोरीलाई ६ लाख रुपैया नगद दाइजो नल्याएको भन्दै ससुरा जेठाजु मिलेर जे गरे ….. July 27, 2021